वासिंटन डिसीमा बृहत हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
वासिंटन डिसीमा बृहत हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न
बिष्णु सितल, वासिंटन डिसी । अमेरिका नेपाल सोसाईटीको आयोजनामा वासिंटन डिसीको मेट्रो क्षेत्रमा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । एएनएसले मेट्रो क्षेत्रका बालबालिकाको क्षमता विकास र नेपाल अमेरिका संबन्धका विविध पक्षमा उनीहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो । प्रतियोगितामा विकल पौडेल, विसर पौडेल, अनिमेश कार्की र आभास चापागाईको वेष्ट फल्सचर्च लालुपाते समूह प्रथम भएको छ ।
वासिंटन डिसी, भर्जिनिया र मेरिल्याण्डका १२ समूहले भाग लिएको उक्त प्रतियोगितामा सरस्वती पौडेल, आरधना अधिकारी, अदिती पौडेल र उपासना अधिकारीको मनासस बुलरनको टोली दोस्रो भएको छ ।
त्यस्तै आशिष दाहाल, आर्या दाहाल, रसिका बुढाथोकी र मनिष अधिकारीको सेन्टीली ग्रीन टोलिले तेस्रो स्थानमा सफलता पाएको छ । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने टोलिलाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा.शंकर शर्माले नगद पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र प्रदान गर्नु भयो । पहिलो, दोस्रो र तेस्रोलाई क्रमश एएनएस तर्फबाट २ सय ४०, दुई सय र १ सय ४० डलर नगद पुरस्कारले सम्मान गरेको छ । यसैगरी सगरमाथा टेलिभिजनका तर्फबाट रामचन्द्र खरेलले क्रमशः ३ सय, २ सय र १ सय डलर थप गरी जम्मा ५ सय ४०, ४ सय र २ सय ४० डलरको नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।
कार्यक्रममा एएनएसका अध्यक्ष नगेन्द्र पौडेलले स्वागत गर्नु भएको थियो भने सचिब मुक्ति दवाडीले संचालन गर्नु भएको थियो । हाजिरी जवाफ कार्यक्रमको संचालन भने अनुप पहाडी, प्रकाश नेपाल र कृष्ण सोपले गर्नु भएको थियो ।
विजयी टोलिलाई बधार्इ ज्ञापन गर्दै प्रमुख अथिति राजदूत डा. शर्माले यस प्रकारका कार्यक्रमबाट किशोर किशोरीहरुमा मातृभूमि र अमेरिका संबन्धी ज्ञान अभिबृद्धिमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने भएकाले यसको महत्व उच्च रहेको बताउनु भयो । सो अवसरमा एएनएस अध्यक्ष पौडेलले अमेरिकामा रहेका नेपाली बालबालिकालाई लक्षित गरेर हालसम्म कसैले पनि कार्यक्रम नगरिरहेको अबस्थामा एएनएसले नयाँ कामको थालनी गरेको बताउनु भयो ।
२९ जेष्ठ २०६९, सोमबार २१:१० मा प्रकाशित